HomeTORKIAFaritra Marmara59 CorluIlay mpanao gazety Mustafa Hoş, mpanao gazety Mustafa Hoş dia manao famotorana
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 59 Corlu, 59 Tekirdag, Intercity Railway Systems, Railway, ANKAPOBENY, Headline, Faritra Marmara, TORKIA 0
mpanao gazety mustafa hosa manao fanadihadiana momba ny lozam-pifamoivoizana corlu
Ny mpampanoa lalàna Galip Yılmaz Özkurşun, izay nitady ny trangan'ny loza tamin'ny lamasinina tao Çorlu, izay namoy ny ainy i 25, nametraka fitoriana ho fanonerana 110 arivo dolara ho an'ny mpanao gazety Mustafa Hoş izay efa nanaraka akaiky ny loza hatramin'ny voalohany.
Mustafa Hoş, mpanao gazety, izay naneho ny fanapahan-kevitry ny raharaha momba ny onitra, araka ny vaovao ao amin'ny 16 Punto: "Nanome ahy ny fitsarana ny mpampanoa lalàna Çorlu. Mikendry ny fitsarana heloka bevava. Ny mpampanoa lalàna 25 izay tsy mahavita manenjika ny fitantanan'i TCDD noho ny tsy miraharaha ny vidin'ny ain'olombelona dia maniry ny 110 arivo kilao ”.
Ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Babıali manombatombana ny raharaha momba ny onitra nosokafana tamin'ny Pleasant, dia nilaza ny mpampanoa lalàna Galip Yilmaz fa tsy misy kaonty manokana momba an'i Özkurşun'a.
Mahafinaritra, ary milaza fa tsy mety amin'ny mpampanoa lalàna ny manaraka ny fihetseham-pon'ny tena manokana sy ny fihetseham-pon'ny mpiasa, Hoş Ny mpanao gazety dia tsy / tsy tokony hanao tsinontsinona ny fahefana ara-pitsarana ”.
Hanohy ny fanarahana aho ”
Raha ny hevitr'izy ireo dia fandrahonana ny etika manoloana ity raharaha ity i Hoş, nilaza i Hoş fa tsy hampatahotra azy ity raharaha ity ary mbola hanohy ny raharaha izy.
Momba ny raharaha
12 Tamin'ny volana septambra, ny fanapaha-kevitra farany momba ny lozam-pifamoivoizana Çorlu dia nanapa-kevitra ny hanendry manam-pahaizana vaovao ary ny fotoana manaraka dia nahemotra amin'ny volana Desambra.
Ny 110 an'arivony kilao momba ny mpampanoa lalàna dia nanokatra fangatahana onitra Mustafa Hoş, komity manam-pahaizana Prof. Toa an'i Mustafa Karaşahin, manam-pahaizana hafa, i Sıddık Binboğa Yarman dia tao anaty delegasiona izay nanaisotra ny lozam-piaramanidina tany Pamukova izay namoy ny ainy i 41 ary i Yarman dia nanao fifandraisana ara-barotra tamin'i TCDD toa an'i Karaşahin. (T24)
Raharaha momba ny loza amin'ny lamasinina Çorlu, Efitrano maha-olona 600 ankehitriny 10 / 09 / 2019 Tamin'ny fihainoana voalohany ny efitrano kely 'noho ny fianakaviana sy ny mpisolovava dia tsy navela tao amin'ny fitsarana avy eo dia nanambara fa nisintona ny fitsarana ny raharaha Çorlu distrikan'i Tekirdag, olona 25 no maty, naratra ny olona 328 tamin'ny fitsarana voalohany tamin'ny fitsarana dia nanokatra ny fitsarana noho ny fianakaviana sy ny mpisolovava ary ny mpisolovava. dia voadaroka teo. Taorian'ny fanombohan'ny fitsarana, dia nihemotra tamin'ity raharaha ity ny tribonaly. Ny fakana am-bavany voalohany dia hatao ao amin'ny 10 Hall of Çorlu Public Education Center amin'ny volana septambra. Araka ny filazan'ny T600, Istanbul avy any amin'ny distrikan'i Uzunköprü ao Edirne Halkalı362 Jolay 6 dia ho any amin'ny yolcu Tekirdağ
Fanambarana gaga tao amin'ny tranga voina momba ny fiaran-dalamby ao Corlu 10 / 09 / 2019 Çorlu 25 328 dia ny fakana am-bavany faharoa momba ny loza tamin'ny fiaran-dalamby izay namonoana ny 1 ary naratra ny 2001. Nahita azy tao amin'ny Ivotoerana Fanabeazana ho an'ny daholobe nataon'ny Fitsarana Assize izy. Ny mpiambina Kurt Road dia ny fahatsiarovana ny tsipika. Fantatr'izy ireo tsara hoe aiza ny lalana haleha. Rehefa nisy ny olana dia nampitandrina avy hatrany ilay tomponandraikitra izy ireo. Tao amin'ny XNUMX, navela ity karatra ity. Ny filazan'ny tompon'andraikitra misahana ny fiarovana dia ny fanapahan-kevitry ny fitsarana fa ireo niharam-boina izay voakasiky ny fanenjehana ihany no afaka miditra am-bavany,…
Ny tranga loza momba ny fiaran-dalamby Çorlu nahemotra ho an'ny 10 Desambra 12 / 09 / 2019 Districtorlu distrikan'i Tekirdağ, olona 25 no maty ary naratra ny olona 328 tamin'ny fitsapana faharoa tamin'ny lozam-piaramanidina tao amin'ny Centerorlu Public Education Center. Araka ny tatitra nataon'i Gökay Basca Birgun; »Tate Régionale du TCDD 1 nandritra ny fakana am-bavany omaly ary tokony hitohy anio Halkalı Turgut Kurt dia mpiandraikitra ny fikojakojana ny lalamby amin'ny mpitantana ny Railway amin'ny 14. Çerkezköy Özkan Polat, Lehiben'ny Fikojakojana sy fanamboarana ny làlana ao amin'ny Lehiben'ny Fikojakojana ny làlana, Celaleddin Çabuk, izay mpiandraikitra ny fikajiana ny fikajiana sy fanamboarana ny làlana ao amin'ny Lehiben'ny fikojakojana ny làlana sy Çetin Yıldırım, lehiben'ny Bridges, no niaro. Tamin'ny fanapahan-kevitra raisina teo amin'ny fitsarana…
Volan'ny arivo tapitrisa kilao amin'ny Muhammet izay namoy ny fianakaviany vokatry ny fahasimban'i Pamukova 26 / 12 / 2013 Pamukova lamasinina loza vokatry ny farantsa very 222 arivo onitra ho an'ny fianakaviana ny Mohammed: Pamukova in Sakarya 41 fahafatesana izay vokatry ny loza lamasinina haingana tao amin'ny didim-pitsarana dia 9 taona tatỳ aoriana. Muhammet Aydin, izay namoy ny reniny sy ny rainy ary ny rahalahiny tamin'ny loza mahatsiravina, dia nahazo ny fitoriana napetraky ny TCDD. Nolazain'ny fitsarana fa ny Muhammad 9 dia homena vola arivo tapitrisa. Ny fitsarana dia nanapaka tamin'ny lozam-piaramanidina nateraky ny lozam-piaramanidina izay nahafatesan'i 222 tao Sakarya Pamukova taona lasa izay. Şaziye reny any amin'ny loza, ny rainy, izay namoy ny rahalahiny Yavuz sy 9,5 taona Mevlüt, hita mihitsy naratra mafy Muhammet Aydın hohamarinina. State lalamby Repoblikan'i Torkia ...
TCDD 103 Andiany Vola Loatra ho an'arivony 15 / 08 / 2019 13 Desambra 2018, fiaran-dalamby haingam-pandeha izay mandeha mankany Ankara, Ankara, Ankara, Turkey. Olona 9 no maty ary naratra ny olona 86 tamin'ny lozam-piaramanidina, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology sy Hopitaly mpikaroka dia manondro fa ny fitsaboana dia nahazo Cetin, fitsaboana mitohy noho ny ratra sy ny fananana, ny fatiantoka ara-pitondrantena, ny TCDD'ye dia namoaka fitoriana ho fanonerana. Tao anatin'ny fangatahana azy tany amin'ny fitsarana dia nilaza izy fa tsy misy sonia amin'ny tobin'i Marşandiz izay nitrangan'ny loza.
Raharaha momba ny loza amin'ny lamasinina Çorlu, Efitrano maha-olona 600 ankehitriny
Fanambarana gaga tao amin'ny tranga voina momba ny fiaran-dalamby ao Corlu
Ny tranga loza momba ny fiaran-dalamby Çorlu nahemotra ho an'ny 10 Desambra
Volan'ny arivo tapitrisa kilao amin'ny Muhammet izay namoy ny fianakaviany vokatry ny fahasimban'i Pamukova
TCDD 103 Andiany Vola Loatra ho an'arivony
CHP Tanrıkulu, nanontany ny Antena i YHT ho an'ireo olona tompon'andraikitra amin'ny loza
Mampiato ny fanadihadiana ataon'ny Corlu amin'ny tolo-kevitry ny AKP sy ny MHP
Afaho ny loza ao Çorlu: Lisitry ny 360 nividy ho an'ny 563 fiaran-dalamby
Ny tolo-kevitry ny Vondrona amin'ny CHP ho an'ny tetik'asa CHOR ho an'ny fiarandalamby
Nampitaina ny tatitra momba ny lozam-pifamoivoizana tao Çorlu ao İMO